Musharaxiinta u taagan madaxweynaha Galmudug oo maanta Baarlamanaka ka hor hadlay – Radio Muqdisho
Musharaxiinta u taagan madaxweynaha Galmudug oo maanta Baarlamanaka ka hor hadlay
Hoolka uu ka socdo shirka maamul u sameynta gobollada Mudug iyo Galguduud ee magaalada cadaado ayaa waxaa maanta si arasmi ah uga bilowday khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne_nimo ee maamul goboleedka Galmudug iyo xilka madaxweyne ku xigeenka.
Musharaxiinta ayaa halkaasi kusoo bandhigay waxyaabaha ay qaban doonaan hadii loo doorto madaxweynaha dowlad_goboleedka Galmudug iyo ballan qaadyadooda ku aadan horumarinta deegaanka hadii loo doorto iyadoo mid weliba uu soo bandhigay khudbad uu ku cabirayo sida uu wax uga qaban karo hadii loo doorto madaxweynaha maamulka labada gobol ee Mudug iyo Galguduud.
Inkabdan 12 musharax ayaa maanta xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ka hor jeediyay khudbadahooda musharaxnimo iyadoo 6 musharax ay u tartameyso xilka madaxweynenimo halka 6 kalena ay u tartamayaan kuxigeenka amdaxweynaha maamulka Galmudug.
Maalinta sabtida ah ee soo socota ayaa waxaa magaalada Cadaado ka dhici doona doorashada madaxweynaha maamulka gobollada dhexe ee Galmudug taasoo ay xubnaha Baarlamanku ugu codeyn doonaan mas,uulka noqonaya madaxweynaha GALMUDUG.
Si kastaba ha ahaatee magaalada Cadaado ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa diyaar garowga doorashada madaxweynaha Galmudug iyadoo habka loo marayo dhisida maamulkana ay amaaneen siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
Ku_xigeenka Ra’isulwasaaraha iyo safiiro ka qeybgalay maalinta agoonta Islaamka